Waa sidee xaaladda magaalada Gaalkacyo oo ay shalay dagaalo culus ka dhaceen? – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Waa sidee xaaladda magaalada Gaalkacyo oo ay shalay dagaalo culus ka dhaceen?
Waxaa maanta xaalad deganaansho oo aan caga badan ku taagneyn laga dareemayaa goobihii ay maalintii shalay ku dagaalameen ciidamada kala taabacsan maamulada Galmudug iyo Puntland, iyadoona la sheegayo in gurmad badan ay kala gaareen labadaasi dhinac.
Dagaal aad u culus oo u dhaxeeya ciidamada maamulada Galmudug iyo Puntland ayaa maalintii shalay muddo 2 saacadood ah ku dhexmaray galbeedka magaalada Gaalkacyo, waxayna labadaasi dhinac dagaalka isku adeegsadeen hubka noocyadiisa kala duwan.
Waxaa dagaalkii shalay la xaqiijiyay inay ku geeriyootay ku dhawaad 10 ruux halka tiro kalena ay ku dhaawacantay, iyadoona dhaq-dhaqaaqa ganacsi iyo isku socodka gaadiidka ee ka jiray magaalada Gaalkacyo uu maanta yahay mid aad u yar.
Magaalada Gaalkacyo waxaa maanta ka jiro cabsi colaadeed oo hareeysay dadka ku nool magaaladaas, waxaana inta badan dadkii ku harsanaa halkaasi ay maalmihii ugu dambeysay isaga barakacayeen guryahooda ku yaalay halkaas.
Dhinaca kale, madaxda maamulada Galmudug iyo Puntland ayaa markii ugu dambeysay si wadajir ah heshiis dhinaca teleefanka ah uga gaaray colaadaha ka jira magaalada Gaalkacyo, inkastoo heshiiskaasi uu u muuqdo mid fashilmay.
Ilaa iyo haatan lama oga sida uu xaalka ku dambeyn doonno, waxaana xilli kasta la filan karaa inuu halkaasi dagaal ka bilawdo, inkastoo haatan xaaladda ay tahay mid aad u degan.